မတူရင် မတုနဲ့ ယူလျင် စုတပည့် Right Place @ Right Time. | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Opinion - Op-ed » မတူရင် မတုနဲ့ ယူလျင် စုတပည့် Right Place @ Right Time.	12
မတူရင် မတုနဲ့ ယူလျင် စုတပည့် Right Place @ Right Time.
Posted by ဦးကြောင်ကြီး on Feb 1, 2016 in Opinion - Op-ed | 12 comments
လတ်တလော မြန်တြံ့နိုင်ငံရေး အခင်းအကျင်းမှာ လူ့သဘော ဆင်ခြင်မိတယ်။ ငယ်တုံးက သူငယ်ခြင်းနဲ့ သင်တန်းတခုခုတက်၊ ကိုယ်က ရပ်လိုက်.. သူက ဆက်သွား.. နောင်မှ အကောင်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ကို ကြည့်ရင်း အခြင်းခြင်းကြား ငါနဲ့ အတူတူ တက်ခဲ့တာ… ကွိကွိကွကွ။ သဘောက ငါလည်း မညံ့ပါလို့ ဆိုခြင်း။ အစပိုင်း အားလုံး တူသယောင်ယောင်… အဲဒါ မမှား.. စကထဲက ဦးကျိုးရင် ဘယ်လို အမြင့်တက်မည်နည်း၊ သို့သော်ကြာလာတာနဲ့ ကွဲပြားမှုကို သတိမမူမိ (သို့) လက်ခံဖို့ခက်တယ်။ သိသူက နောက်ဆုတ်ပေးတယ်၊ သိပြီးလည်သူ ပူးပေါင်းတယ်။ ခါးသီးတဲ့ အမှန်တရားက သူ့ကို လိုက်မမှီတော့တာပဲ။ သမိုင်းမှာကြည့်ရင် စစ်ကြိုခေတ် သခင်အောင်ဆန်းဘဝ တန်းတူရည်တူ အများကြီး။ စစ်ကြီးလည်းပြီး အချိန်ကာလ၊ အဖြစ်အပျက် တိုက်စားမှုကြောင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်း ထိပ်ရောက်သွားတယ်၊ သခင်ပေါက်စ၊ နိုင်ငံရေးနို့နာမစင်သေးသူလို့ ဆက်မြင်သူ၊ သူလည်းလအု ငါလည်းလအု တူတူထုခဲ့တာ ဇွတ်မြင်နေသူတွေ ဘုဂလန့်တိုက်ရင်း စင်ပြိုင်ထောင်ရင်း ပြတ်ကျန်ခဲ့။ လူလည်လူပါးပဲ ရှင်သန်ရစ်တယ် မဟုတ်လား။
ဒေါ်စုလက်ထက်မှာလဲ ဒီသဘောပဲ။ နောက်တယောက် ပေါ်လာတဲ့အခါ ဒီလိုပဲ သွားပါဦးမည်.. အတိ မာနနဲ့ လူတွေကိုး။ ရှစ်လေးလုံး အရေးတော်ပုံနဲ့ စစ်အာဏာသိမ်း နောက်ပိုင်း ဒေါ်စုနဲ့အပြိုင် မရှားဘူး။ အများစု ဖဆပလဟောင်းတွေ၊ လက်ဝဲတွေ ဒါမျိုး နပ်တယ်ထင်ရဲ့.. သူ့ကို ရှေ့ဝိုင်းတွန်းတင်တယ်။ ဦးနု ဒီငြိမ်း၊ ဦးသုဝေ ဒီမိုကရေစီပါတီ၊ ဒီချုပ်မှခွဲထွက်သူ ဦးအောင်ကြီး ပြည်ထောင်စုဒီမိုအဖွဲ့ချုပ်၊ မဆလ အရည်ခွံချွတ် တစညခေါင်းဆောင်ပိုင်း၊ ဦးတင်ဦးကတော့ စကထဲက ဒေါ်စုနဲ့ပေါင်းတယ်။ နိုင်ငံရေးမျိုးဆက်မှာဆို ဦးနုသမီး ဒေါ်သန်းသန်းနု၊ ဦးကျော်ငြိမ်းသမီး ဒေါ်ချိုချို ကျော်ငြိမ်း၊ ဦးဗဆွေသမီး ဒေါ်နေရီဗဆွေ၊ အာဏာရှင် ဦးနေဝင်းသမီး ဒေါ်စန်ဒါဝင်းလည်း နာမည်ထွက်ခဲ့တာပဲ။ သူဖြစ်ကိုယ်လည်းဖြစ်ရမည် စိတ်နဲ့လုပ်ခဲ့တာ မမှားပါ..။ အနစ်နာခံ လုပ်ပေးသူများကို ဦးညွှတ်ပါ၏။ အစပိုင်း အားလုံး မျှော်ခွင့် ရှိပါသည်။ ဆယ်တန်းအစ ဆေး၊ စက်မှု ဝင်ခွင့်မှန်းတာ အပြစ်မဟုတ်။ သူငယ်ခြင်းတယောက်ဆို ဆေးအမှတ်မှန်း၊ နှစ်ခါဖြေ နှစ်ခါမအောင်.. ပထမအကြိမ်ပြောတော့ အမှတ်မမှီမှာစိုးလို့ ခြစ်ချ၊ ဒုတိယတခါလည်း မအောင်..။ အတွက်လွဲပုံ ပြောပါတယ်။
အခုလည်း ဒေါ်စုနဲ့ ပုခုံးခြင်းယှဉ်သူ အတော်များတယ်.. ထုတ်မပြောပေမဲ့ ပုံဖေါ်ထားတာ မြင်နေရတယ်။ ပြန်လည်စေ့စပ်ရေးမူနဲ့ ဘွားဒေါ် အောက်ကျို့ဆက်ဆံ၊ နားလည်မှုပေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်။ ဒါကို မသိသူက မသိ၊ မသိခြင်ယောင်ဆောင်သူလည်း မရှား။ အချို့ကြတော့ အတင်းပုံသွင်းလုပ်ထားတာကို တကဲ့အစစ်ထင်တယ်။ ဒီမိုကရက်တစ်အုပ်စုမှာတော့ အဲဒီဟာ မရှိသလောက်ဖြစ်ပြီ၊ ကိုယ့်အစု ခေါင်းဆောင်အနေနဲ့ ယှဉ်တာပဲရှိတော့တယ်။ ဘောင်းဘီဝတ်နဲ့ ဘောင်းဘီချွတ် အတိုက်အခံဘက်မှာ (ပြောရတာ အရသာရှိလိုက်တာ) အဲလိုလူတွေ ရှိနေတယ်။ လွှတ်တော်အနေနဲ့ဆို ဦးရွှေမန်း၊ ဦးခင်မောင်မြင့်၊ ဖွတ်ပါတီမှ သမတဦးသိန်းစိန်နဲ့ ဦးဌေးအူး၊ ဦးအောင်သောင်းတော့ ကြွသွားပြီ။ ရွှေးကော် ဦးတင်အေး၊ ဒုသမတဟောင်း ဦးတင်အောင်မြင့်၊ စစ်တပ်ကဆို ကာချုပ်ဗိုလ်မင်းအောင်လှိုင်၊ ဒုကာချုပ်ဗိုလ်စိုးဝင်း…။ အထက်မှာ ပြောခဲ့သလို အချို့က ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘာကောင်မှန်းမသိတာ၊ အချို့က တမင်ပုံသွင်းခံရတာ အဟုတ်ထင်..။ တူတူတန်တန် တန်းညှိကြေးဆို သူတို့အထက်က ဒုချုပ်ဟောင်းဦးမောင်အေးတောင် အဆင့်တူမဟုတ်။ လူထုခေါင်းဆောင် ဒေါ်စု၊ စစ်တပ်ချုပ်ကိုင်ထားဆဲ တပ်ချုပ်ဟောင်းဦးသန်းရွှေ နှစ်ဦးပဲ ထိပ်ဆုံးမှာ ရှိသည်။ မယုံ စောင့်ကြည့်ပါ.. လပိုင်း၊ နှစ်ပိုင်းအတွင်း ခုမြင်နေသူ အတော်များများ နိုင်ငံရေးစင်မြင့်မှ ပျောက်ကွယ်သွားမည်။
အစိုးရသစ်လက်ထက် အဓိကကျတဲ့ ရာထူး စဉ်းစားရအောင်။ ဗွိုက်စ်ဂျာနယ်မှာ ဖတ်ရတယ်.. ဦးရွှေမန်းအတွက်နေရာ အတော်စဉ်းစားခက်နေကြောင်း။ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥကထ နေရာတောင် သူထောက်ခံတဲ့လူ ခန့်မှာမို့ သူရမည့်ရာထူး ဒါထက်ပိုမြင့် ဖို့ရှိသည်။ အစိုးရသစ် အရေးကြီးဆုံးနေရာတွေက ကာလုံထိုင်ခုံ ၅ခုံနဲ့ ပထမတန်းဌာန ဝန်ကြီးများ။ လွှတ်တော်ဥကထ ကာလုံ ၂နေရာပြီးရွေးပြီးပြီ။ ဗွိုက်စ်မှာပဲ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးကို ဒီချုပ်၊ ဖွတ်၊ စစ်သား မဟုတ်၊ အပြင်က ဒီချုပ်ကို ထောက်ခံသူဆိုတော့ ကာလုံထိုင်ခုံလည်း ဖြစ်တာမို့ မြင်မိတာ ရှမ်းအမျိုးသားဒီမို ဦးခွန်ထွန်းဦး နဲ့ ၈၈ငြိမ်းပွင့် ကိုကိုကြီး….။ ဟုတ်ကဲ့.. ခုတလော သံရုံးဧည့်ခံပွဲ အတွေ့များတဲ့ နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေးဘွဲ့ အိုင်အာ ကျောင်းပြီးထားသူ ဦးကိုကိုကြီး ကို ရွေးပါတယ်၊ မင်းကိုနိုင်လည်း ပါလာနိုင်သည် သို့သော်သူ့အပေါ်တွင် များစွာမူတည်မည်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ လောကမှာ ဆရာဝန်ထက် အနုပညာသမား ပြောဆိုရ ပိုခက်သည်။ လောကကို ကယ်တင်ရန်သာ စဉ်းစားပြီး ကိုယ့်ကိုယ်ကို ကယ်တင်ရန် မသိကြ။ ကိုမြအေးနဲ့ ကိုဂျင်မီတို့အား ငြိ်မ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွင် တွေ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ကိုကိုကြီး အရွေးခံရလျင် ဦးခွန်ထွန်းဦး ဒုသမတ ဖြစ်ကိန်းနည်းပြီ ကြားဖြတ်မှာ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဝင်အရွေးခံ၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ဥကထရာထူး ချိန်လျင်ချိန်.. ဖြစ်နိုင်ဆုံးကတော့ ပထမတန်း ကက်ဘိနက် ဝန်ကြီးရာထူး သို့မဟုတ် ဦးအောင်မင်းတို့ အမ်ပီစီမှာ ဦးဆောင်တနေရာ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ၈၈ငြိမ်းပွင့်နှင့် ဦးခွန်ထွန်းဦးတို့ပါတီ ကက်ဘိနက်တွင် မြင်ရကိန်းရှိသည်။ ခြစ်ကိုယ်ဂျီး မိုးသီးဇွန်အား အမ်ပီစီ တနေရာ အကျွန်ုပ် ဦးကြောင်ကြီး ယတြာပြုပေးမည်၊ ရခိုင်အေအန်ပီတော့ အသံကြောင့်ဖါးသေ မဖြစ်ပါစေနဲ့ ဆုတောင်းသည်။ (အမှန်တော့ အဲဒါ ဖြစ်ပါစေ ဆုတောင်းတာ.. မှတ်ပလား။ )
ကျန်ကာလုံအဖွဲ့ဝင် ဒုသမတ ရာထူး ၂ခု ဒီချုပ်မှ သာဖြစ်ဖွယ်ရှိလို့ သူရဦးရွှေမန်းအတွက် မြင့်မြင့်မားမားထဲက အပြင်နေရာသာ ကျန်မည်။ ရွှေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင်ဥကထ လို့အပြောများသော်လည်း အဲဒီနေရာမှ နောက်ကျော ဓါးဖြင့်ထိုးလျင် ဆေးမှီဖွယ်မရှိသဖြင့် စွန့်စားမှု သိပ်များသည်။ ခြေဥခုံရုံးဥကထ နှင့် တရားရုံးချုပ် တရားသူကြီး ရာထူးတွင် လစ်လပ်မှု မရှိက အစားသွင်းခွင့် ရှိမည်မထင်။ တရားစီရင်ရေးကို အရပ်သားလက် အပ်ဖွယ်ရှိသောကြောင့် ဒါလည်း ဖြစ်နိုင်မည်မဟုတ်။ စီးပွားရေးကော်မရှင်လို နေရာမျုိးလည်း သူ့မိသားစု စီးပွားရေးကြောင့် သဟဇာတ မဖြစ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာ အပြည့်အဝပေးမည့် အမျိုးသား ပြန်လည် သင့်မြတ်ရေးကော်မရှင်လိုမျိုး.. အမ်ပီစီ ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်မျိုး သင့်တော်လိမ့်မည်။ ဒါမှမဟုတ် ကက်ဘိနက်မှာပဲ အဲလိုမျုိးနာမည်နဲ့ ဌာနဖွဲ့.. ကက်ဘိနက် ဒုတိယခေါင်းဆောင် ပါသတ်မှတ်ပေး..။ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ သာသနာရေး ပေါင်းပြီး လူအများကြိုက်နေတဲ့ သူရဦးအောင်ကို ဝန်ကြီး ဖြစ်နိုင်သည်၊ လူ့အခွင့်ရေးကော်မရှင်ဥကထ (သို့) ဝန်ထမ်းရွေးချယ်လေ့ကျင့်ရေးအဖွဲ့ ဥကထ နေရာ မျှော်လင့်တာလဲမမှား ဒါပေမဲ့ ဒုဝန်ကြီးအဆင့် သို့ အငယ်တန်းဝန်ကြီး အဆင့်တွေမို့ သိပ်မထင်။ သိပ်ကြိုက်လျင် ရန်ကုန်မြို့တော်ဝန်အထိ တွန်းတင်နိုင်သည်။ အဲလိုတွေးလျင် နေပြည်တော်ကောင်စီဥကထလည်း နီးစပ်သည်။ အမျိုးသားလွှတ်တော်ဥကထ ဦးခင်မောင်မြင့် လွှတ်တော်နောက်ဆုံးရက်မှာ ဒေါ်စုကို အလှဆုံးလို့ မြှောက်ထားတော့ သူလည်း ကက်ဘိနက် (သို့) အပြင်ဖက်တနေရာတွင် ပါလေမလား။ အနည်းဆုံးတော့ အမျိုးသားလွှတ်တော်အဓိကကော်မတီတခုခုတွင် ဥကထဖြစ်မည်။
လွှတ်တော်တွင်း တိုင်းရင်းသား ၃ဦး နေရာယူပြီးမို့.. ဒုတိယ သမတ လူမျိုးရေး အခြေခံ ရွေးမည်မထင်။ ဒီချုပ်မှ အမာခံ ၂ဦး စိတ်ကြိုက်ရွေးမည်။ ဒေါ်စု သမတ လုပ်ခွင့်မရလျင် သမတ မဖြစ်မည့် ဒုတိယသမတသည် ထက်ထက်မြက်မြက်၊ ပညာတ် အမျိုးသမီးထဲမှ ဖြစ်ပြီး သမတဖြစ်မည့် ဒုသမတ ပညာတတ် သံတမန်ခင်း နားလည်သူ အမျိုးသားထဲမှ ဖြစ်ပါမည်။ ဒေါ်စုသမတ ဖြစ်လျင်တော့ အဲဒီ အမျိုးသား ဒုသမတလောင်း နှင့် တွဲဖက်နိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ စစ်တပ်မှလာမည့် ဒုသမတမှာ လက်ရှိသမတ ဦးသိန်းစိန်၊ ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် သို့မဟုတ် သမတရုံးဝန်ကြီးများထဲမှ တဦးပင် ဖြစ်လာဖွယ်ရှိသည်။ မည်သို့ဆိုစေ သမတဘပြောင် အဆိုးဓမြလက်ထက် လွှတ်တော်ရှေးဦးနေ့များတွင် ဝန်ကြီးအဖွဲ့စာရင်း နာမည်၃၀သာ အတည်ပြုပြီး ဆိုင်ရာဌာနများ မကြေငြာဟု ဆိုကြသည်မို့ ယခုအကြိမ်တွင်လည်း ထိုနည်း၎င်းသာ ဖြစ်ဖွယ်ရှိကြောင်းပါ။
မှတ်ချက်။။ ဒီချုပ်လွှတ်တော်ကို အကြံပြုလိုတာကတော့ ပထမဆုံး တင်သွင်းမည် အဆိုများထဲတွင် ယုံကြည်ချက်ကြောင့် အကျဉ်းကျသူများအား လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့်အတူ ၁၉၈၈ နောက်ပိုင်း စစ်အစိုးရ၏ ဖြုတ်ထုတ်သတ် အလုပ်ခံရတဲ့ ဒီမိုကရေစီဖက်တော်သား ဝန်ထမ်းများကို အသိမှတ်ပြု ကြည့်ရှုပေးဖို့ပါ။
မြန်တြံ့နိုင်ငံရေး ရှေ့ဖြစ်အတတ်ဟော ပညာရှိသုခမိန်ကြောင်ကြီး
အောင်ကြူးhas written 587 post in this Website..
kai says: ဒေါ်စုက.. သူ့ရုံးအကြီးအကဲ ဒေါက်တာတင်မာအောင်ကို.. အချိန်ကပ်ပြီးရာထူးဖယ်ပစ်ပလိုက်တာဟာ.. (သာမန်နိုင်ငံရေးအတွေးနဲ့ဆိုရင်တော့… )သမ္မတရာထူးအတွက် လျှာလိုက်တာပါပဲ..။
ဒီထက်သေချာတာတောင်.. သေချာလို့မရ..။ ဒေါ်စုကိုယ်တိုင်.. သမ္မတမဖြစ်ဖူးဆိုရင်ပေါ့…။
အခြေခံဥပဒေထဲ.. ပြဌာန်းထားတာကတော့.. လွှတ်တော် ၂ရပ် ဥက္ကဌ၊ ဒုဥက္ကဌတွေက(သာ).. သမ္မတအရည်အချင်းနဲ့ပြည့်မှီမမှီ စစ်ပေးရမယ်ဆိုတာပဲ..။
အဲဒီလူတွေက.. အဖွဲ့ချုပ်လူနဲ့.. သူတို့ရွေးပေးထားတဲ့သူတွေမို့.. ဒေါ်စုကို .. ဒုသမ္မတ ကောက်တင်ပေးလိုက်လည်း.. စစ်ဆေးမယ့် အခြေခံဥပဒေခုံရုံးက မရှိနဲ့.. ဘာဘာ.. ဘာဖြစ်တာလိုက်လို့..။ သူရဘွဲ့ရတွေဆိုတာ.. တိုက်ခိုက်ရေးစစ်သားစစ်စစ်တွေမို့.. တပ်အပေါ်သစ္စာနက်နက်ရှိတာသေချာသူတွေပေါ့…။
သူတို့ကို .. နေရာပေးထားရင်.. စစ်တပ်နဲ့အဖွဲ့ချုပ်ကြား.. အကောင်းဆုံးကြားခံပဲ…။ နေရာကြီးတွေ ပေးသင့်..။ ကျုပ်ဆိုရင်တော့.. ဦးရွှေမန်း ရွေးကော်ဥက္ကဌ..။
လွှတ်တော်အကြီးအကဲတွေထဲ.. ရှမ်းမပါတာဟာဖြင့်.. ဦးခွန်ထွန်းဦး ဒုသမ္မတနေရာ သေချာနေပုံ…။
မွန်မပါသေးသမို့.. လက်ရှိတပ်ချုပ်က.. တပ်ဖက်က တက်ရမယ့် ဒုသမ္မတလားမသိ…။
ဦးကိုကိုကြီး၊ ဒေါ်စုစုလွင်၊ ဦးထင်ကျော်၊ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ညီမျှချင်းတွေချမိ…။
kai says: ၆၀(ဃ) ဒုတိယသမ္မတများသည် နိုင်ငံတော်သမ္မတအတွက် သတ်မှတ်ထားသည့်
အရည်အချင်းများနှင့် ပြည့်စုံခြင်းရှိ၊မရှိကို ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နှင့်
ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ပါဝင်သော လွှတ်တော်နှစ်ရပ်၏ အကြီးအမှူး
များနှင့် ဒုတိယအကြီးအမှူးများ ပါဝင်သည့်အဖွဲ့က စိစစ်ရမည်၊
60(d) The Pyidaungsu Hluttaw andaBody comprising the Heads and Deputy
Heads of the two Hluttaws in the Pyidaungsu Hluttaw shall scrutinize whether
or not the Vice-Presidents possess the qualifications prescribed for the
ယူအက်စ်မှာဆိုရင်တော့.. တရားရေးရုံးချုပ် Supreme Courtကစစ်ဆေးခွင့် ရှိရတယ်..။ အဲဒီကဆုံးဖြတ်ချက်က အတည်ပဲ..။
Legal Memorandum: Is Ted Cruz Eligible for the Presidency …
Jan 14, 2016 – Memorandum: Is Ted Cruz Eligible for the Presidency? … The Supreme Court would today hold that the Fourteenth Amendment’s Equal Protection Clause …..  Id.  1 The Laws of the United States of America 87 (1796).
ဦးကြောင်ကြီး says: ဒေါက်တာ တင်မာအောင် ငယ်လွန်းတယ်၊ သမတ မဖြစ်နိုင်။ ရွေးခဲ့လျင် သူ့ထက် အသက်ကြီး ဒေါ်စုအောက် ငယ်သူ ဖြစ်နိုင်သည်။ လူမျိုးအားဖြင့်လည်း ရခိုင်မို့ ထိပ်ပိုင်းနေရာ ကိုတာ ကုန်ပြီ။ အဓိက ကတော့ အသက် အတွေ့အကြုံ ပေးဆပ်မှု အဆင်သင့် မဖြစ်သေး။ အစိုးရဝန်ထမ်း အ
နေနဲ့တွက်လျင် သူသည် ဌာနညျွန်ချုပ် ပီအက်စ်အိုနဲ့ အလားသဏ္ဍန်တူလို့ မြို့နယ်ဆင်းတဲ့အခါ ထိပ်တန်းမြို့နယ် ရမှာပဲ။ သို့တည်းမဟုတ် အစိုးရသစ်လက်ထက် နိုင်ငံတကာနဲ့ ပူးတွဲလုပ်မည့် ဒေါ်ခင်ကြည် ဖေါင်ဒေးရှင်း ဒါမှမဟုတ် အစိုးရနဲ့ နိုင်ငံတကာ အလှူ ရှင်ကြား ဆက်သွယ်
ဦးရွှေမန်းကို ရွေးကော်ဥကထ ပေးဖို့ သိပ်မလွယ်၊ ဒေါ်စု ပေးခြင်တောင် ကန့်ကွက်ကြလိမ့်မည်။ လုံခြုံ ရေးအမြင်အရလဲ ဦးရွှေမန်းသည် သူ့လူကိုယ့်ဖက်သား အဆင့်ထက် မပိုသေး။ အရေးကြုံလို့ သူ့ကျေးဇူးရှင် ဦးသန်းရွှေ နဲ့ ဘော့ စ်အသစ် ဒေါ်စုတို့အကြား လွန်ဆွဲပွဲ ဖြစ်လာလျင် မည်သို့ ဆုံးဖြတ်မည်ကို မှတ်ကျောက် အတင်မခံနိုင်သေး။ လွှတ်တော်နောက်ဆုံးနေ့ရက်မှာကို စစ်တပ်တွင် မညီမျှမှုကို ဝေဖန်သူ ဒီချုပ်အမတ် သတိပေးခံရသည် မဟုတ်လား။ ဒီချုပ်လူကြီးများ တမင် သွေးတိုးစမ်း (သို့) ဘွားဒေါ် မြင်အောင်ပြတာ ဖြစ်နိုင်သည်။ ဦးရွှေမန်းအတွက်လည်း ဆုံးဖြတ်ရ ခက်မှာ သေချာသည်။ စစ်တပ်ကအားအင်နဲ့၊ ဒီချုပ်ကလည်း လူထုထောက်ခံမှု အပြည့်.. နှစ်ဖက် ရင်ဆိုင်မိလို့ တပ်ဖက်ယိုင်လိုက်ရင် ဒီမိုမျိုးကန်းမည်။
ယမကာကျော်စွာ အူးမြောက်မြောက် (B.E) says: မူးလာဘီဂျာ
ဟိုအူးလေးဂျီးပြောသလို သီဟတင်စိုးကိုပဲ ဝကွပ်အပ်လိုက်ပါဒေါ့
သင့်အေးရိပ် says: .ရွှေဥမှန်းကြီးကို… ယုံရခက်ခက် ဖြစ်နေတာ…ကျနော် တစ်ယောက်တည်း မဟုတ်ဘူးပဲ….
kai says: တပ်သတင်းစာအလိုအရ.. တပ်ကတော့.. ၅၉(စ) မပြင်တော့မယ့်သဘောရှိတယ်…။
ဒါမှမဟုတ်.. Searching fire လား..။
kai says: အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် (NLD) ပါတီ အစိုးရဖွဲ့ပါက နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ရာထူးကို NLD နှင့် ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီဝင် မဟုတ်၊ NLD ထောက်ခံအားပေးသူ တစ်ဦးကို လျာထားကြောင်းကိုလည်း NLD ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ဦးဝင်းထိန်က ပြောကြားသည်။ – See more at: http://thevoicemyanmar.com/index.php/news/item/9726-das#sthash.9JFcixO9.xJGimMvd.dpuf
အဲလိုဆိုတော့… ဦးကိုကိုကြီးက.. နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးလားမသိ…။
ကြည့်ရတာ.. ဒေါ်စု ဘုံပျောက်နေသမို့.. ဒေါ်စုကို သမ္မတရအောင်တင်မယ့်ပုံဟေ့..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 132
Kyi Lwin says: ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သမ္မတမဖြစ်ထိုက်ဘူးဆိုတဲ့ ၅၉ (စ) ဆိုတာကြီးကို ထည့်တွေးဖို့ကိုမလိုတော့ပါ။
တကယ်တန်းပြောရရင် ၂၀၀၈ အခြေခံဥပဒေဆိုတာကြီးက မိုးနတ်မင်းကြီးချ ပေးထားလို့ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ မပယ်မဖျက်တန်းလက်ခံကျင့်သုံးရမယ့်ဥပဒေကြီးလို့ မှတ်ထားရမယ့် ကိစ္စ ၊လှေနံဒါးထစ်တရားသေမှတ်ရမယ့် ကိစ္စမှမဟုတ်ပဲ။ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတွေမှာ အခြေခံဥပဒေကို လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်ရေးဆွဲခဲ့တာတွေရှိတယ်လို့ဖတ်ဖူးပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီရဲ့ ဘိုးအေ အမေရိကား မှာတောင် အကြိမ်ကြိမ် အခါခါ ပြင်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။
ပြည်သူကြိုက်လို့ သူ့ကိုပဲ ပုံအော မဲပေးခဲ့တဲ့ကိစ္စပဲ။
သူ သမ္မတဖြစ်သွားလို့လည်း တိုင်းပြည်က ဆုံးရှုံးနစ်နာစရာမရှိတာ လူတိုင်းအသိ။
ရေးဆွဲထားတဲ့ ဥပဒေက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို အတိအကျ ရည်ရွယ်ရေးဆွဲထားတယ်ဆိုတာထင်ရှားနေပါတယ်။
(၅၉ ( ဃ) နိုင်ငံတော်ရေးရာများဖြစ်သော နိုင်ငံရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေး ၊စီးပွါးရေး ၊ စစ်ရေး စသည့်အမြင်များ။
၅၉ ( စ) ကိုယ်တိုင်သော်လည်းကောင်း မိမိ၏မိဘ တပါးပါးသော်လည်းကောင်း ၊ မိမိ၏ ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသော်လည်းကောင်း ၊ မိမိ၏ တရားဝင် သားသမီး တဦးဦးသော်လည်းကောင်း ထိုတရားဝင်သားသမီးတဦးဦး၏ ဇနီး သို့မဟုတ် ခင်ပွန်းသော်လည်းကောင်း နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏ ကျေးဖူးသစ္စာတော်ကို စောင့်ရှောက်ရိုသေသူ သို့မဟုတ် နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏လက်အောက်ခံဖြစ်သူ သို့မဟုတ် တိုင်းတပါး၏နိုင်ငံသားဖြစ်သူများမဖြစ်စေရ၊
ထိုသူများသည် နိုင်ငံခြားအစိုးရ၏လက်အောက်ခံဖြစ်သူသော်လည်းကောင်း၊ တိုင်းတပါး၏နိုင်ငံသားသော်လည်းကောင်း ခံစားရသောအခွင့်အရေးများနှင့် ကျေးဖူးခံစားခွင့်များကို ခံစားနိုင်ခွင့်ရှိသူများမဖြစ်စေရ။)
ဒီဥပဒေကိုရေးဆွဲထားခြင်းဟာမြန်မာနိုင်ငံသားတွေ အဲဒီလောက်တောင် ဆင်ခြင်ဥာဏ်မရှိတော့ဘူးလို့ နှိမ်ချရာလည်းရောက်ပါတယ်။
ကထူးဆန်း says: သူကြီးကိုဘဲ ပြန်မေးရမှာဘဲ ..
ဆိုင်းငံ တာ နဲ့ ပြင်တာ … ဆိုင်းငံ့ တာက လွှတ်တော် ၇၅% သဘောတူ လိုပါသလား .. ၅၀% ကျော်နဲ့ ရပါသလား .. ဒါဆို ဆိုင်းငံ့ နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် သမ္မတ လုပ်ခွင့် ရှိပါသလား …
ဦးကြောင်ကြီး says: သဂျီးမာမွတ်ခိုင် မအားဘူး… သဂျီးဂဒေါ် ပေါင်ဂျားဒဲ…. မှားယို့ ယင်ခွင်ကြားထဲ အိတ်နေရို့ ကိုယ်စားဖြေပေးမဲ….။ လိုလို့ စစ်တပ်နဲ့ ညှိနေရဒါပေါ့ဂျ၊ သူတို့မဲ မှိုရင် အများစုမဲနဲ့ တီးထည့်လိုက်ပီပေါ့ ဥနှစ်လုံးထဲနဲ့ ဘောင်းဘီကြက်နေဒဲ့ ကထူးဆန်းရှယ်….
kai says: ကြည့်ရတာ.. ခြေဥထဲပညာပါပါလုပ်ရင်ရနိုင်တယ်..။ ၇၅%မလိုလောက်ဘူး..။
အမျိုးသားပြန်လည်သင့်မြတ်ရေးလုပ်နေလို့သာ.. တပ်ကိုသွားညှိနေတာလို့ထင်တာပဲ..။ လက်ရှိသမ္မတဦးသိန်းစိန်က.. လက်မှတ်တော့ထိုးပေးရလိမ့်မယ်..။
၁၉၅၉ က..ဦးနေ၀င်းကို.. အိမ်စောင့်အစိုးရအဖြစ်ပေးချင်တော့.. ဦးနုက ခြေဥပြင်ဆင်ချက်အက်ဥပဒေထုတ်ပြီး.. ရှိတဲ့ပုဒ်မ ၁၁၆ပြဌာန်ချက်ကို ဆိုင်းငံ့လိုက်ဖူးခဲ့တာမို့.. ဒီသဘောထပ်လုပ်လည်းဖြစ်တာပါပဲ..။
တကယ်တော့.. ဥပဒေဆိုတာ လူကလုပ်တာပါ..။ လူအများစုသဘောတူရင် အကုန်ပြင်.. ကုသိုလ်ရပါတယ်..။
ယူအက်စ်ဆို.. ဆေးခြောက်တောင် တရားဝင်လုပ်ပစ်တာ..။ ဂေးတွေတောင်.. လင်မယားဖြစ်ကုန်တာတွေရှိတာပဲ..။
ဒေါ်စုကို.. သမ္မတမဖြစ်စေချင်သူတွေဟာ.. တိုင်းပြည်ကောင်းစားသွားမှာကို မနာလိုသူတွေလို့ပြောရမှာပဲ..။
kai says: ” ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ရပ်ဆိုင်းခြင်းအပေါ် ဆရာဦးကိုနီ . . . သုံးသပ်ချက် … ”
တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်လောက်ပဲ ဖြေရှင်းရခက်တဲ့ အခက်အခဲမျိုးပဲ ဖြစ်နေပါစေ။ ဆရာဦးကိုနီ ကိုသာ သွားမေးလိုက်ပါ။ ဆရာ့ဆီရောက်သွားရင် အမြဲပဲ ရှင်းလင်းတိကျတဲ့အဖြေ ရှိတယ်။
ပုဒ်မ ၅၉ (စ) ရပ်ဆိုင်းခြင်းအပေါ် ဆရာဦးကိုနီ
“အခုကျနော်တို့ပြောနေတဲ့ ယာယီဆိုင်းငံ့တယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စက ဖွဲ့စည်းပုံဆိုင်ရာ
အကြပ်အတည်း ပေါ်ပေါက်တဲ့အခါမျိုးမှာ သုံးဖို့ ကျနော်တို့ပြောတာပါ။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေမှာပါတဲ့ ပြဌာန်းချက်တရပ်ကို ဆိုလိုတာပါ။
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုမသုံးတော့ဘူး။ စစ်အုပ်ချုပ်ရေး၊ စစ်ဗိုလ်ချုပ်က
ကြိုက်တာလုပ်မယ် ဆိုတဲ့ပုံမျိုးကိုပြောတာ။ အခုကျနော်တို့ပြောနေတာက
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြဌာန်းချက်တခုကို ယာယီဆိုင်းငံ့တာ။
အဓိပ္ပါယ်အများကြီးကွာပါတယ်။ ဒါက နိုင်ငံရေးလိုအပ်ချက်အတွက် လုပ်ရတာပါ။
လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိုင်းပေါ့ဗျာ။ လွှတ်တော်ကို ဥပဒေကြမ်းတင်ပြီးတော့မှပဲ
ဥပဒေအသစ်တရပ်ပြဌာန်းရမယ်။ အထူးဥပဒေတရပ်အနေနဲ့ ပြဌာန်းဖို့လိုလိမ့်မယ်။
အဲဒါကို တိုက်ရိုက်အထူးဥပဒေအဖြစ်ပြဌာန်းမလား၊ သို့တည်းမဟုတ် နောက်တမျိုးက
အရေးကြီးအဆိုတခုအရင်တက်မယ်။ အရေးကြီးအဆို ဆိုတာက ပြည်သူလူထုက
mandate (လုပ်ပိုင်ခွင့်) ပေးလိုက်ပြီ။ (၅၉) (စ) ကြောင့်ပြည်သူ့ဆန္ဒကို
အကောင်အထည်ဖေါ်လို့မရဘူး၊ အကြပ်အတည်းဖြစ်နေတယ်။ ဒါကြောင့်
အဲဒီအကြပ်အတည်းဖြစ်နေတဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပုဒ်မ (၅၉)(စ)ကို
အဲဒီအရေးကြီးအဆိုပေါ်မှာ ဆွေးနွေးမယ်၊ ဆုံးဖြတ်မယ်။ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က
သဘောတူတယ်ဆိုရင် ဆုံးဖြတ်ချက်ကျသွားပြီ။ အဲတော့ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်က
သဘောတူတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်သည် ပြည်သူတရပ်လုံးက ဒီပုဒ်မကို
ဆိုင်းငံ့ဖို့သဘောတူတယ်ဆိုတဲ့ အဓိပ္ပါယ်နဲ့ အတူတူပါပဲ။
အဲသလို သဘောတူပြီးပြီဆိုပြီးမှ ဒီအပေါ်မှာဥပဒေကြမ်းတင်ပါ
ဆိုတာ ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်နာယက ညွန်ကြားမယ်၊
ဥပဒေကြမ်းတခုရေးတင်မယ်။ ဒီအပေါ်မှာ ဆွေးနွေးကြမယ်။
လိုရင်လိုအပ်သလို ပြင်ဆင်မယ်။ ပြီးတော့မှာ ဒီဥပဒေကြမ်းကို အတည်ပြုမယ်။
အတည်ပြုပြီးရင် သမ္မတက လက်မှတ်ထိုးမယ်။ အဲဒါက သူရဲ့ process
(လုပ်ထုံးလုပ်နည်း) အမှန်ပဲ။ ဒါဆိုရင် အခုသွားမလား
(သို့မဟုတ်) နောက်အစိုးရသစ်ဖွဲ့ပြီး သမ္မတအသစ်ပေါ်မှ သွားမလား။ အဲဒါကတော့